Labo Kamid Ah Xidigaha Barcelona Oo Laga Helay Xanuunka Coronavirus
HomeWararka CiyaarahaLabo kamid ah Xidigaha Barcelona oo laga Helay Xanuunka Coronavirus
January 4, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain 0
Barcelona ayaa xaqiijisay in Pedri iyo Ferran Torres ay yihiin ciyaartoydii ugu dambeysay ee kooxda ee laga helay COVID-19.
Darajooyinka Xavi ayaa si aad ah hoos ugu dhacay ka dib markii ay bateen kiisaska coronavirus toddobaadyadii la soo dhaafay, iyadoo wax ka yar 10 ciyaartoy ay hore uga maqnaayeen cudurka faafa.
Haatan, Barca ayaa xaqiijisay in Pedri iyo Torres ay sidoo kale qaadeen cudurka, inkastoo labada ciyaaryahan ee isku dalka ah ay haatan dhaawac kaga maqan yihiin.
Barcelona ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri: “Pedri iyo Ferran Torres waxaa laga helay cudurka ‘Covid-19’, ciyaartoyda xaaladdooda caafimaad waa wanaagsan tahay, waxayna ku sugan yihiin guryahooda, kooxdu waxay ku wargelisay hay’adaha ay khuseyso.”
Xavi ayaa sidoo kale la filayaa inuu waayi doono lix ciyaaryahan oo kale sida Gavi , Ousmane Dembele , Alejandro Balde , Sergino Dest , Philippe Coutinho iyo Abde Ezzalzouli kulanka Arbacada ee Copa del Rey ee Linares.
Pedri ayaa la filayaa inuu maqnaan doono inta badan bisha isagoo dhaawac muruqa ah qaba, halka Torres uu weli ku jiro wadadii uu uga soo kabsan lahaa jabkii soo gaaray.